Madaxweynaha Brazil oo shaqada ka tiray xildhibaan la sheegay inuu lacag ku dhex qariyay “nigiskiisa” |
Madaxweynaha Brazil oo shaqada ka tiray xildhibaan la sheegay inuu lacag ku dhex qariyay “nigiskiisa”
Madaxweynaha Brazili Jair Bolsonaro ayaa shaqada ka ceyriyay nin ay xulafo dhow ahaayeen, kaas oo la sheegay in la xiray kaddib markii uu lacag ku qariyay “nigiskiisa”
Warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in booliisku ay baarayaan xildhibaan aqalka sare dalkaas ka tirsan oo lagu magacaabo Chico Rodriguez kaas oo lagu eedeeyay si xun u isticmaalidda lacagihii loogu talogalay COVID-19.
Ciidamada dalkaas ayaa Arbacadii galay guriga Chico Rodriguez oo ku yaalla gobolka Roraima.
Wargeysyada ugu waaweyn dalkaas oo ay ka mid yihiin O Globo, Folha de S. Paulo iyo Estadao, ayaa shaaciyay in booliiska baaritaanka sameynayay ay soo saareen lacag caddaan ah oo dhan 30,000 oo lacagta Brazil ah (5,300 doollarka Mareykanka). Qeyb ka mid lacagtaas waxaa laga soo saaray nigiska Rodriguez.
Booliiska ayaa sheegay inay ka hortagayaan in lacagaha loogu talogalay wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee gobolka Roraima loo adeegsado si kale.
Rodriguez ayaa sheegay in booliisku ay shaqadooda qabsanayeen, balse wuxuu beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay.
Bolsonaro ayaa ku eedeeyay warbaahinta in sheekadaas ay tusaale ugu soo qaateen in dowladdiisu ay tahay mid musuq ah. Balse taas beddelkeed wuxuu sheegay inay tusaale cad u tahay sida ay dowladdiisa ula dagaallameyso musuqmaasuqa, iyadoo aan loo eegeynin cedda lagu qabto.
Bolsonaro waxaa xilka loo doortay sanadkii 2018, wuxuu ballan qaaday inuu la dagaallamayo musuqmaasuqa, balse marki uu xilka qabtay kaddib wuxuu wajahay eedeymo badan oo musuqmaasuq ah, waxaana ka mid ahaa wiilkiisa Flavio,oo lagu eedeeyay inuu six un u isticmaalay lacagta dadweynaha.